कण्डमका बारेमा १२ गलत धारणा र वास्तविकता - Everest Dainik - News from Nepal
कण्डमका बारेमा १२ गलत धारणा र वास्तविकता
२०७७, २१ पुष मंगलवार
१. महिलाको योनि अथवा पाठेघर भित्र कण्डम सजिलैसँग हराउन सक्छ र कण्डम बाहिर निकाल्नका लागि शल्यक्रियाको आवश्यकता पर्न सक्छ ।
वास्तविकता: यौन सम्पर्क गर्दा कण्डम विरलै चिप्लिन्छन् भन्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ । सही तरिकाले नलगाएको कारणबाट औषतमा २% कण्डमहरू मात्र यौन सम्पर्क गर्दा फुट्छन् अथवा चिप्लिएर फुस्किन्छ । कण्डम लगाई यौन सम्पर्क गर्दा वीर्य स्खलन भैसकेपछि लिङ्गको फेदमा कण्डमको घेरालाई समातेर लिङ्गलाई योनि बाहिर निकालेमा कण्डम चिप्लिन पाउँदैन । यदि केही गरेर कण्डम चिप्लिहाल्यो भने पनि योनि भन्दा भित्र जाँदैन र यसलाई सजिलै बाहिर निकाल्न सकिन्छ । चिप्लिएको कण्डम योनि बाहिर निकाल्न कुनै गाह्रो हुँदैन र त्यसको लागि कुनै अपरेशनको आवश्यकता पर्दैन । कण्डमको आकार ठूलो भएकाले यो पाठेघरको मुखबाट भित्र छिर्न सक्दैन । यदि पुरुषले कण्डम फुटेको थाहा पाएमा उसले आफ्नो यौन साथीलाई यो कुरा भन्नु पर्छ र महिलाले आकस्मिक गर्भनिरोध चक्की प्रयोग गर्न सक्छिन र अनिच्छित गर्भधारणबाट जोगाउन सकिन्छ ।
२. यौन सम्पर्क गर्दागर्दै बीचमै कण्डम फुट्छ, त्यसैले यसलाई किन प्रयोग गर्ने ?
वास्तविकता: औषतमा २% कण्डम मात्र यौन सम्पर्कको समयमा फ वास्तविकता : फुट्ने वा चिप्लने गर्छन्, त्यो पनि सही तरिकाले प्रयोग नगरे मात्र । कण्डम प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले यसको म्याद बाँकी छ छैन प्याकेज बिग्रेको छ छैन, हेर्नुपर्छ । म्याद नाघेको कण्डम प्रयोग गर्नु हुँदैन । कण्डमको प्याकेट खोल्दा कहिल्यै पनि धारिलो औजार प्रयोग गर्नु हुँदैन, यसले कण्डमलाई क्षति पु¥याउन सक्छ । कण्डमलाई घाम नछिर्ने र चिसो ठाउँमा राख्ने गर्नुपर्छ । कण्डममा लगाइएको चिप्लो पदार्थले कण्डमलाई फुट्नबाट बचाउँछ । तीन तरिकाले कण्डमलाई चिप्लो पार्न सकिन्छः योनिबाट प्राकृतिक रुपमा निस्कने रसले, थप चिल्लो पदार्थ लगाएर अथवा पहिले नै चिप्लो पार्ने पदार्थ लगाइएको कण्डम प्रयोग गरेर । ग्लिसरिन अथवा सिलिकोन जस्ता वस्तुबाट बनेको चिप्लो पदार्थले रबरलाई हानि गर्दैन । यस प्रकारका चिप्लो पार्ने पदार्थ लगाइएका कण्डमहरू बजारमा अथवा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपलब्ध छन् । तेल अथवा यस्तै अरु कुनै चिप्लो लगाएर कण्डम प्रयोग गर्न हुँदैन, किनभने तेलले रबरलाई क्षति पु¥याउन सक्छ ।
३. धारणा : कण्डम गर्भ रोक्नका लागि त्यति धेरै प्रभावकारी छैन । धारणा ः कण्डम गर्भ रोक्नका लागि त्यति धेरै प्रभावकारी छैन ।
वास्तविकता : कण्डम पुरुषको उत्तेजित (ठाडो भएपछि) लिङ्गमा लगाइने एक प्रकारको खोल हो । यसले सुक्रकीटलाई योनिमा पस्न नदिएर गर्भ रहनबाट बचाउँछ । यदि हरेक पटक यौन सम्पर्क गर्दा सही तरिकाले कण्डम प्रयोग गरेमा गर्भ रोक्ने कु्रामा यो ९८% सम्म प्रभावकारी छ । यसको अर्थ के हुन्छ भने सँधैभरि सही तरिकाले कण्डम प्रयोग गर्ने १०० जना दम्पतीहरूमध्ये एक वर्षको अवधिमा २ जना महिला मात्र गर्भवती हुने सम्भावना रहन्छ । कण्डम प्रयोग गर्नेहरू गर्भको रोकथाम गर्न असफल हुनु भनेको कण्डमलाई सही तरिकाले प्रयोग नगर्नु अथवा हरेक फटक यौन सम्पर्क गर्दा कण्डम प्रयोग नगर्नु हो । सही तरिकाले कण्डम प्रयोग नगरे गर्भ कण्डम प्रयोग गर्ने १०० जना दम्पत्तीमा पहिलो वर्षमा करिब १५ जनाले आफ्नो चाहना विपरित गर्भ धारण गर्छन् ।
याे पनि पढ्नुस श्रीमानले प्रयोग गर्ने ‘कण्डम’ पनि श्रीमतिले नै ल्याइदिनुपर्ने
३. कण्डमले यौन आनन्द घटाउँछ र पुरुषको यौन इच्छामा पनि कमी आउँछ
वास्तविकता : कसै कसैले कण्डमले यौन संवेदनशीलतालाई केही मात्रामा घटाउँछ भन्ने विश्वास गर्छन् भने धेरैले कण्डम प्रयोग गरेपछि मनमा अनिच्छित गर्भ रहन्छ कि भन्ने डर नहुने भएकोले यौन आनन्द बढाउन फाइदाजनक भएको बताउँछन् । कण्डममा चिप्लो पार्ने पदार्थ लगाएर पनि यौन आनन्दमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । तर, चिप्लो पार्ने पदार्थ धेरै बढी भयो भने कण्डम चिप्लिने सम्भावना हुन्छ । ग्लिसरिन तथा सिलिकोनबाट बनेका चिप्लो पार्ने पदार्थहरू रबरबाट बनेका कण्डमको लागि सुरक्षित हुन्छन् । सफा पानी र थुकलाई पनि चिप्लो पार्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । कण्डम लगाउनु भन्दा पहिले एक दुई थोपा चिप्लो पार्ने पदार्थ यस भित्र राखेमा यसले कुनै कुनै पुरुषमा यौन संवेदनशीलता बढाउँछ ।
४. कण्डमको प्रयोगले पुरुषलाई नपुंशक अथवा दुर्वल बनाउन सक्छ
वास्तविकता : कण्डम प्रयोग गरेमा पुरुष नपुंशक हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण अहिलेसम्म भेटिएको छैन । पुरुषमा यौन दुर्वलता हुने धेरै कारणहरू छन्, केही कारणहरू शारीरिक छन् भने केही भावनात्मक छन् । कण्डमले यौन संवेदनशीलतामा अलिकति सुस्तता ल्याउन सक्ने भएकाले केही पुरुषहरू, खास गरेर उमेर बढी भएका पुरुषहरूलाई, आफ्नो लिङ्ग लामो समयसम्म उत्तेजित अवस्थामा राख्न गाह्रो हुन सक्छन् । कतिपय दम्पत्तिहरूले कण्डम लगाउने क्रममा यौनक्रीडाको आनन्द समेत प्राप्त गर्न सक्छन् र यसबाट यौन उत्तेजना बढ्न सक्छ ।
५. कण्डमले उत्तेजित लिङ्गलाई कसेर राख्ने हुँदा वीर्य स्खलन चाँडै हुन्छ ।
वास्तविकता : कण्डम तन्किने र लचिलो हुने हुँदा यसले लिङ्गलाई कस्दैन र शीघ्र वीर्य स्खलन गराउँदैन । अझ, लिङ्गमा कण्डम लगाउने कार्य यौन क्रिडाकै एउटा नियमित प्रक्रिया भएकोले यसले लिङ्गलाई धेरै वेरसम्म उत्तेजित अवस्थामा राख्न र शीघ्र वीर्य पतनलाई रोक्न सहयोग गर्छ ।
६. धारणा : कण्डम लगाउँदा लिङ्ग तथा योनिमा चिलाउने र गन्हाउने पानी बग्ने हुन सक्छ
वास्तविकता : मानिसहरूमा रबरको एलर्जी ज्यादै कम हुन्छ । तथापि, कण्डम प्रयोग गर्दा कसैकसैलाई योनि अथवा लिङ्ग वरिपरि वा योनि भित्र हल्का रुपमा जलन हुने वा चिलाउने अथवा एलर्जी पनि हुनसक्छ । (जस्तैः चिलाउने, रातो देखिने, यौनाङ्ग, काछ अथवा तीघ्रामा डावर आउने वा रातो हुने पनि हुन सक्छ । यसो हुनुको कारण रबरको एलर्जी भएको हुन सक्छ । तर रबरकै कारणले हो अथवा कण्डममा लगाइएको चिप्लो पदार्थको कारणले एलर्जी भएको हो भन्ने पत्ता लगाउनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा नरङ्गाएको तथा वासना नआउने चिप्लो पदार्थ लगाइएको कण्डमको छनौट गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ । यदि यसबाट पनि एलर्जि भइरहेमा परिवार नियोजनको वैकल्पिक साधन प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
याे पनि पढ्नुस यौन सम्पर्क गर्दा महिलाहरू कण्डम लगाउन किन मन पराउँदैनन् ?
७. कण्डम प्रयोग गर्दा पुरुष अथवा महिलालाई खराब असर पर्न सक्छ र सरुवा रोगहरू अथवा क्यान्सर ÷अर्वुद रोग पनि हुनसक्छ । रोगहरू अथवा क्यान्सर/अर्वुद रोग पनि हुनसक्छ ।
वास्तविकता : कण्डम प्रयोग गर्ने महिला अथवा पुरुषलाई तुरुन्तै अथवा पछि गएर कुनै पनि गंभीर किसिमको नकारात्मक असर परेको हालसम्म थाहा छैन । कण्डम प्रयोग गर्दा कण्डम भित्र सामान्य रुपमा नै वीर्य स्खलन हुन्छ, तर वीर्य अथवा शुक्रकीटहरू योनि भित्र छिर्न पाउँदैनन् । कण्डम प्रयोग गरेकै कारणबाट महिला अथवा पुरुषलाई क्यान्सर भएको हालसम्म कुनै प्रमाण छैन । बरु, कण्डम प्रयोग गरेर यौन सम्पर्क गरेका महिला तथा पुरुषहररूमा हुने यौन संक्रमण, पटक पटक पेल्भिसमा इनफेक्सन हुने ९एक्ष्म्० तथा पाठेघरको मुखमा क्यान्सर हुने जस्ता रोगहरू र यी रोगहरूका कारणले हुन सक्ने बाँझोपनको समेत रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
८. कण्डमले एच.आइ.भि. लगायतका यौन संक्रमणको रोकथाम प्रभावकारी रुपमारुपमा गर्दैन
वास्तविकता : कण्डम एक प्रकारको खोल हो, जुन पुरुषको उत्तेजित वास्तविकता : लिङ्गमा ठीक्कसँग मिल्ने गरी बनाइएको हुन्छ । यसले पुरुषको वीर्य अथवा लिङ्गमा तथा महिलाको योनिमा कुनै संक्रमण छ भने त्यसलाई एक अर्कामा सर्न नदिन छे्कवारको रुपमा काम गर्छ । योनिमा अथवा गुदद्वारमा यौन सम्पर्क गर्दा यदि सही तरिकाले कण्डम प्रयोग गरिएको छ भने यो नै एक मात्र यस्तो साधन हो, जसले गर्भधारण हुन र एच.आइ.भि. लगायत अन्य यौन रोगहरू सर्नबाट समेत सुरक्षित राख्न सक्छ । कण्डमको प्रयोगलाई अत्यधिक प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रत्येक पटक यौन सम्पर्क गर्दा सही तरिकाले प्रयोग गर्नै पर्छ । यौन सम्पर्क नै नगर्ने अथवा अति विश्वासिलो एकजना यौन साथीसँग मात्र यौन सम्पर्क गर्ने उपाय बाहेक यौन संक्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि कण्डमको प्रयोग नै बढी प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ । कण्डममा एच.आइ.भि. विषाणु छिर्न सक्ने प्वालहरू हुँदैनन् र एच.आइ.भि. विषाणु आफैले कण्डममा प्वाल पारेर छिर्न पनि सक्दैनन् । यथार्थमा, कण्डम प्रयोग नगरेको खण्डमा जति जनालाई एच.आइ.भि. सर्छ, सही तरिकाले र प्रत्येक पटक यौन सम्पर्क गर्दा कण्डम प्रयोग गर्ने हो भने ती मध्ये ८०% देखि ९५% सम्मलाई एच.आइ.भि. सर्नबाट बचाउन सकिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस कण्डमको अभाव सुरु
९. कहिलेकाँही मात्र कण्डम प्रयोग गरेर एच.आइ.भि. लगायत यौन संक्रमण हुनबाट बच्न सकिँदैन बच्न सकिँदैन
वास्तविकता : अधिकतम सुरक्षाका लागि प्रत्येक पटक यौन सम्पर्क गर्दा कण्डम प्रयोग गर्नैपर्छ । तथापि, कुनै कुनै अवस्थामा भने कहिले काँही मात्र कण्डम प्रयोग गरेमा पनि सुरक्षित हुन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, यदि आफ्नो विश्वास प्राप्त यौन साथी भएको कुनै पुरुषले अर्को कुनै यौन साथीसँग कण्डम प्रयोग गरेर एक पटक मात्र यौन सम्पर्क गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा कण्डमले एक पटक मात्र प्रयोग गर्दा पनि धेरै नै सुरक्षा प्रदान गर्दछ । तर एच.आइ.भि. लगायत यौन रोग सर्ने जोखिममा पटक पटक पर्न सक्ने व्यक्तिहरूका लागि कहिलेकाँही मात्र कण्डम प्रयोग गर्दा कमै मात्र सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
१०. धारणा : कहिलेकाँही मात्र यौन सम्पर्क गर्ने, श्रीमतीसँग बाहेक अरूसँग पनि यौन सम्पर्क गर्ने र पैसाको लागि यौन सम्पर्क गर्ने व्यक्तिले मात्र कण्डम गर्ने गर्छन
वास्तविकता : यो कुरा सत्य होइन । कण्डम सबैका लागि, उनीहरूको वैवाहिक स्थिति अथवा यौन व्यवहार जे जस्तो भए तापनि, एउटा उपयुक्त गर्भ निरोधको साधन हो र कण्डम माग्न आउने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि कण्डम दिनुपर्छ । कहिलेकाँही मात्र यौन सम्पर्क गर्नेहरूले यौन संक्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि कण्डमको भरपर्ने गरे तापनि, विश्वभरि नै विवाहित दम्पत्तीहरूले गर्भको रोकथामका लागि पनि कण्डम प्रयोग गर्दछन् । उदाहरणका लागि जापानमा गर्भनिरोधका साधनहरू प्रयोग गर्ने विवाहित दम्पत्तीहरू मध्ये सबै भन्दा बढी ४२ प्रतिशतले कण्डम नै प्रयोग गर्दछन् ।
११. धारणा : एकै पटक दुइटा कण्डम लगाएमा बढी सुरक्षित हुन्छ ।
वास्तविकता : दुई वा दुई भन्दा धेरै कण्डम लगाउँदा हुने फाइदा सम्बन्धमा कुनै प्रमाणित जानकारी छैन । सामान्यतया एक पटक दुईटा कण्डम लगाउन सिफारिस गरिँदैन, किनभने यसबाट बढी घर्षण पैदा हुन्छ र संभोगको समयमा कण्डम च्यातिन सक्छ ।
१२. धारणा : पुरुषको लिङ्गमा कण्डम जति बढी कस्सिएको हुन्छ महिलालाई त्यति नै बढी सुरक्षा हुन्छ
वास्तविकता : लिङ्गमा कण्डम निकै कस्सिएको छ भने वीर्य रसाएर शुक्रकीट बाहिर आउने अथवा यौन सम्पर्कको समयमा कण्डम चिप्लिने सम्भावना कम हुन्छ भन्ने विश्वासले मानिसहरू यसो भन्छन्, जुनकुरा विल्कुलै गलत हो ।
यथार्थमा, यदि कण्डम निकै नै कस्सिएको छ भने यौन सम्पर्कको समयमा कण्डम च्यातिने बढी सम्भावना हुन्छ । कण्डम लगाउँदा कण्डमको टुप्पोलाई खाली राख्न जरुरी हुन्छ, किनभने पुरुषले वीर्य स्खलन गरेपछि यसै खाली ठाउँमा सुरक्षित रुपमा वीर्य जम्मा हुन्छ । यसो गरेमा वीर्य स्खलन भएपछि पनि कण्डम बढी तन्किदैन ।